RASMI: Roberto Firmino oo seegaya kulanka habeen dambe ee kooxda Barcelona – Gool FM
RASMI: Roberto Firmino oo seegaya kulanka habeen dambe ee kooxda Barcelona
(England) 06 Maajo 2019. Tababare Jürgen Klopp ayaa xaqiijiyay in weeraryahanka reer Brazil ee Roberto Firmino uusan diyaar u ahayn inuu ciyaaro kulanka Barcelona ee habeen dambe Talaadada.
Klopp ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka lugta labaad ee wareega afar dhamaadka Champions League ay kula ciyaari doonaan kooxda Barcelona habeen dambe ee Talaadada garoonka Anfield.
Roberto Firmino ayaa ku biiray liiska xidigaha seegaya kulanka Barcelona sida Maxamed Saalax iyo Naby Keïta.
Roberto Firmino ayaa dhaawac ka soo gaaray dhanka muruqa Isbuucii hore inta lagu gudi jiray tababarka kooxda Liverpool, isagoo seegay kulankii Huddersfield, kahor inta uusan 10 daqiiqo ciyaaray kulankii lugta hore ee Barcelona.
Laakiin wuxuu ku guuldareystay inuu ciyaaro kulankii Sabtidii lasoo dhaafay ee Newcastle, taasoo xaqiijineysa inuu seegi doono kulanka habeen dambe ay kula ciyaari doonaan Barcelona garoonka Anfield.
Si walbaba Liverpool ayaa bari oo Talaado ah kula ciyaari doonta kooxda Barcelona garoonka Anfield, waxaana sugeysa shaqo aad u adag, maadaama ay lasoo kulmeen guuldaro 3-0 ah kulankii lugta hore ee ka dhacay garoonka Camp Nou.
Klopp oo farriin adag u diray shaqsiyaadka ku fikiraya in Liverpool ay guuldarro ku dhammaysan doono xilli ciyaareedkan
Barcelona oo fariin qiiro leh u dirtay Saalax, kahor kulanka ay habeen dambe wajahayaan kooxda Liverpool